I-Primrose Lodge kunye neGadi
"INTSHA NGO-AUGUST 2021" Yonwabele le ndawo iNgcono iSand' ukuqeshwa ngokuQinisekileyo kwaye iBanzi 2 Bed Lodge nje umgama oyi-5 min ukuya eTipperary Town kunye nokujulwa kwelitye kwiGlen yodumo yaseAherlow. Ihonjiswe kumgangatho ophezulu, iimbono ezimangalisayo, i-25 min drive ukuya kwiCashel kunye needolophu zaseCahir. Ilungele iintsapho ezinqwenela ukubaleka kwilizwe, abahambahambayo, izibini, abathanda ibhayisekile abanqwenela ukukhenketha ingingqi yeMunster. Phonononga iindlela ezininzi zokuhamba/umjikelo kwiminyango yethu umz. (Ilitye leTarabh) kunye nazo zonke ngaphakathi komgama wokuhamba.
IPrimrose Lodge inobubele kwisitulo esinamavili. Kubantu abathanda igalufa iTipperary Golf Resort ilapha nje (2km), iBallykisteen Golf Resort (5km) kunye neDundrum Golf Course (17km). Iindwendwe zinokundwendwela iindawo ezininzi ezikufutshane zabakhenkethi umz. I-Rock of Cashel kunye neCahir Castle ngelixa utyelela kwiZiko lelifa le-Bru Boru kunye nayo yonke nje i-20minute drive. Iilwandle zeflegi eziBlue zaseClonea naseArdmore zikumgama nje ongaphezulu kweyure.
Kumnandi gcina ubumelwane imizuzu emi-5 ukusuka kwidolophu yaseTipperary. Iziko lokuThenga leNdawo, Uluhlu lweendawo zokutyela ezintle onokukhetha kuzo. Iikhosi zeGalufa zi-3 zizonke ziphelele kwi-10 km enye kwenye. I-pub yendawo yi-2 km kuphela. Indawo entle kakhulu. Complex Sports, Swimming Pool kunye Gym kufutshane. Kuphela yi-1.5 km ukusuka kwindlela u-N24 Limerick ukuya eWaterford.
Ndifumaneka ngomnxeba 24/7 nangona kunjalo ngenxa yaso nasiphi na isizathu ukuba ndingafunwa, kwaye andifumaneki ndinomntu omthembileyo oya kuba khona. Ndimtsha kule nto kwaye injongo yam kukukwamkela ngandlela zonke ukuba kukho into engalunganga ndicela undazise kwaye ndiza kwenza konke okusemandleni am ukuyilungisa ngokukhawuleza. Ikhaya lethu lise next door so umntu usoloko elapha xa efuneka.
Ndifumaneka ngomnxeba 24/7 nangona kunjalo ngenxa yaso nasiphi na isizathu ukuba ndingafunwa, kwaye andifumaneki ndinomntu omthembileyo oya kuba khona. Ndimtsha kule nto kwaye injo…